Yakachipa CNC yekuchinja epurasitiki fekitori nevatengesi | Ouzhan
Zvakanakira epurasitiki anotendeuka zvikamu
-Kuderedzwa kwekukwesana kwakanaka, kusagadzikana kwekukwesana uye kuzvidzora wega.
OEM yakagadziriswa epurasitiki kutendeuka sevhisi-China Shanghai CNC epurasitiki kutendeuka zvikamu mugadziri
Ouzhan inogadzira inosanganisa indasitiri nekutengeserana, ichipa imwechete-yekumira kutendeuka uye yekugaya michina yekugadzirisa masevhisi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, inogona kugadzirisa yakakwira-chaiyo CNC kutendeuka epurasitiki zvikamu zvine yakatsiga uye yakavimbika mhando. Idzi michina zvikamu zvinogadzirwa pachishandiswa hwakanakisa mbishi zvigadzirwa, izvo zvinowanikwa kubva kune anozivikanwa-ekururamisa zvikamu zvevatengesi pamusika. Yedu yakasimba uye yehunyanzvi timu yehunyanzvi uye inoshanda manejimendi uye mashandiro sisitimu anogona kuona iko kugadzirwa kwakanaka kwepurasitiki kutendeuka muchina zvikamu. Uye zvakare, iyo CNC inoshandura zvigadzirwa zvepurasitiki zvakapihwa zvakanyatso kutevedzera nemhando yepamusoro uye inogona kushandiswa mune akasiyana mafekitori ekushandisa. Uye isu tinogona kupa anokwikwidzana mutengo masevhisi epurasitiki CNC ekushandura zvigadzirwa kune edu akakosha vatengi.
Zvimiro zveOuzhan epurasitiki anotendeuka zvikamu
Zvakanakira Ouzhan Plastic Turning Service
- Zvese zvakaringana CNC yakashandura zvigadzirwa zvepurasitiki zvinoenderana nekuongororwa kwakasimba kwehunhu.
- Zvinoenderana nemadhirowa kana sampuli kugadzira chaiyo epurasitiki anotendeuka zvikamu.
Pashure: Yakasarudzika mehendi kabhoni simbi yekutendeuka zvikamu zvekugadzirisa accessories
Zvadaro: Nokuchengetedza zvikamu nendarira